हेर्नुहोस सुनको मूल्य बढ्नुका ६ कारण : कारण अनौठो ! – Pradesh Online Khabar
हेर्नुहोस सुनको मूल्य बढ्नुका ६ कारण : कारण अनौठो !
August 14, 2019 आर्थिक
काठमाडौं, साउन २९ : नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा दैनिक नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँ कारोबार भएको छ । यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो ।मूल्य बढ्नुका कारण यस्ता छन्ः
-जम्मु–कश्मीर विवाद । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा राजु चौधरीले लेखेका छन् ।
आज फेरी बढ्यो सुनको भाउ : फेरि बन्यो रेकर्ड : हेर्नुहोस कति त तोला को ?
सुन तोलाको ७० हजार पुग्न आँट्यो ! कतिसम्म पुग्ला त ?
आज इतिहासकै उच्च बिन्दूमा सुनको भाउ : हेर्नुहोस कती
सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड !